Mifampiresaka Amin’Andriamanitra ve Ianao?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Goujrati Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Malagasy Malayalam Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tseky Tshiluba Tsonga Twi Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Wolaita Xhosa Zandé Zoloa Éwé
Mifampiresaka foana ny mpinamana isaky ny afaka manao izany, na mivantana, na an-telefaonina, na an-taratasy, na amin’ny e-mail, sy ny sisa. Mila mifampiresaka amin’Andriamanitra foana koa isika, raha te ho akaiky azy. Ahoana anefa no hifampiresahantsika aminy?
Miresaka amin’i Jehovah isika rehefa mivavaka aminy. Tsy hoatran’ny miresaka amin’ny olona anefa ny mivavaka. Mila mitadidy isika fa ilay Mpamorona antsika, izany hoe ilay Avo Indrindra eo amin’izao rehetra izao, no iresahantsika rehefa mivavaka isika. Tokony hanaja lalina sy hanome voninahitra azy isika. Misy fepetra tsy maintsy fenointsika koa raha tiantsika hohenoiny ny vavaka ataontsika. Ireto misy telo:
Voalohany, i Jehovah Andriamanitra irery no tokony hivavahana, fa tsy i Jesosy, na “olo-masina”, na sary. (Eksodosy 20:4, 5) Milaza mazava tsara ny Baiboly hoe: “Amin’ny zava-drehetra, dia ampahafantaro an’Andriamanitra ny fangatahanareo, amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fitalahoana mbamin’ny fisaorana.” (Filipianina 4:6) Faharoa, tsy maintsy atao amin’ny anaran’i Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra, ny vavaka. Hoy mihitsy i Jesosy: “Tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako.” (Jaona 14:6) Fahatelo, tsy maintsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ilay izy. Hoy ny Baiboly: “Na inona na inona angatahintsika ka mifanaraka amin’ny sitrapony, dia mihaino antsika izy.” *—1 Jaona 5:14.
Mifampiresaka matetika ny mpinamana
Tsy ho mpinamana intsony anefa ny olona roa, raha ilay iray foana no miteny. Tokony havelantsika hiresaka amintsika koa àry Andriamanitra ary tokony hohenointsika, tsy misy hafa amin’ny hoe mpinamana samy miteny rehefa mifampiresaka. Fantatrao ve hoe ahoana no ataon’Andriamanitra mba hiresahana amintsika?
Toy ny hoe miresaka amintsika i Jehovah, amin’ny alalan’ny Teniny, dia ny Baiboly. (2 Timoty 3:16, 17) Intỳ misy ohatra manazava izany: Rehefa mamaky taratasy avy any amin’ny namanao ianao, dia toy ny hoe izy mihitsy no miresaka aminao, na dia tsy eo akaikinao aza. Toy ny hoe avelanao hiresaka aminao koa i Jehovah rehefa mamaky Baiboly ianao. Hoy i Gina, ilay voaresaka tany aloha: “Raha tiako hinamana amiko Andriamanitra, dia mila vakiko ny ‘taratasy’ nalefany ho antsika, izany hoe ny Baiboly.” Hoy koa izy: “Lasa akaiky kokoa an’Andriamanitra aho rehefa namaky Baiboly isan’andro.” Mamaky Baiboly isan’andro ve ianao, ka mamela an’i Jehovah hiresaka aminao isan’andro? Hahatsapa hoe akaiky kokoa an’Andriamanitra ianao raha manao an’izany.
^ feh. 5 Manazava bebe kokoa momba ny vavaka ny toko 17 amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.